Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Murashax Trump oo Shaaciyay Madaxweyne Ku Xigeenkiisa.
Daawo: Murashax Trump oo Shaaciyay Madaxweyne Ku Xigeenkiisa.
Posted by Dayr	/ July 19, 2016
Murashaxa Madaxweynaha Xisbiga Jamhuuriga Maraykanka Donald Trump ayaa shaaciyey ninka uu la doonayo inuu u noqdo Madaxweyne kuxigeenka hadii uu ku guulaysto doorashada soo socota ee bisha November 2016.
Trump ayaa sheegay inuu xilka Madaxweyne Kuxigeenka larabo Mike Pence oo ah Guddoomiyaha xilka ka degaya ee Gobalka Indiana. Mr.Pence ayaa horey usoo noqday Xubin kamid ah Aqalka Kongareeska Maraykanka wuxuuna kamidyahay xubnaha sida weyn ugu xidhan shirkadaha taageera Xisbigaasi Jamhuuriga.
Mike Pence ayaa lagu tilmaamaa xubnaha garabka midig ee Asal raaca xisbiga Jamhuuriga, Trump ayaa doonaya in magacaabistiisa uu ku helo taageero dheeraad ah dhanka hogaamiyayaasha xisbiga Jamhuuriga oo weli qaarkood dhaliilo badan u haya Donald Trump.
Mike Pence iyo Trump ayaa marar badan isku khilaafay arrimaha siyaasada, sida siyaasada arrimaha dibada iyo dhanka dhaqaalaha, balse waxay hada sheegayaan inay si wadajir ah u raadin doonaan guusha xisbigooda ee doorashada soo socota.
Murashax Trump ayaa khudbadii uu ku shaacinayey ninka xilka Madaxweyne ku xigeenka u tartami doona ayaa si weyn ugu dhaliilay murashaxa xisbiga kasoo horjeeda ee Dimuquraadiga Hillary Clinton oo uu ku tilmaamay siyaasiyad dhaawac weyn u geysan doonta Maraykanka oo loo baahan yahay in laga hortago.